नेपालगञ्जमा गाई संरक्षणका लागि समिति गठन - Butwal Online
नेपालगञ्जमा गाई संरक्षणका लागि समिति गठन
नेपालगञ्ज, २८ साउन। नेपालगञ्जमा छाडा छोडिएका गाई लगायतका जनावरको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भएको छ ।
नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको आयोजनामा मंगलबार भएको सर्बपक्षिय बैठकले ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणा अध्यक्ष रहेको समितिको उपाध्यक्षमा डा. विनोद कर्ण, सचिवमा समिरमान श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा श्याम शाक्य र सदस्यहरुमा वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रञ्जित खाँ, श्रृष्टि गौतम र दीपक लोध रहेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी पवन कनौजिया समितिको सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।
बैठकले उपप्रमुख उमा थापा मगरको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधी सदस्य रहेको अनूगमन समिति गठन गरेको छ । बैठकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. राणाले नेपालगञ्जमा छाडा पशु चौपाय विकराल समस्याको रुपमा रहेको भन्दै अल्पकालिनसँगै दीर्घकालिन समाधानको खोजी भईरहेको बताए ।
गाई संरक्षणका लागि धेरैजनाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ , मेयर राणाले भने,– कोष संचालन भएपछि संरक्षणका लागि सहयोग पुग्नेछ । बैठकमा सहभागीले जनावरको दर्ता प्रक्रिया(ट्यागिङ)को ब्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । उपप्रमुख उमा थापा मगरले नेपालगञ्जमा हाल निर्माणाधिन गौशाला नभई काञ्जिहाउस भएको बताउँदै गौशालाका लागि नेपालगञ्जमा स्थान अभाव स्पष्ट पारे । छाडा पशु चौपायको ब्यवस्थामा सबै पक्षबीच हातेमालो हुन जरुरी भएको उनले बताए ।
बैठकमा नेकपाका नगर अध्यक्ष डिल्ली बराल(अमिर), नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति प्रशान्त विष्ट, राप्रपाका मनोज श्रेष्ठ, अभियन्ता डा. विनोद कर्ण, विवेक श्रेष्ठ, समिरमान श्रेष्ठ, श्याम शाक्य, हरि सुवेदी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २३ का वडा अध्यक्ष रञ्जित खाँ लगायतले विभिन्न सुझाव दिए । नेपालगञ्जको काञ्जिहाउसमा रहेका जनावर मध्ये साढे, गाई, घोडा, बाच्छा–बाच्छी लगायतलाई पार्टेशन गरि अलग–अलग राख्ने, टिनका टहरा थप गर्ने लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।